काठमाडौं । तपाईंले आजसम्म एक लिटर पानीका लागि कति रुपैयाँसम्म तिर्नु भएको छ ? धेरै भए १०० रुपैयाँसम्म तिर्नुभएको होला, नत्र नेपालमा सामान्यतया ३० रुपैयाँमा एक बोत्तल पानी पाउँन गाह्रो हुदैन । तर नेपालमा पनि विदेशबाट आएको पानी पिउने व्यक्तिहरु रहेका छन् । जापानलगायत विभिन्न मुलुकबाट केही खास व्यक्तिहरुका लागि विशेष पानी आयात हुने गरेको छ ।
यो बीचमा भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीले पिउने पानीको मुल्य कति पर्छ ? आज हामी विश्व क्रिकेटमा अलग पहिचान बनाउन सफल कोहलीको पानीका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
विराट लामो समयदेखि आईसीसी एकदिवसीय क्रमशः १ नम्बरमा छन् र टेस्ट क्रममा २ नम्बरमा छन् । विराट लगातार ८ बर्षदेखि खेल्दै आएका छन् । यसको पछाडि वास्तविक कारण उनको लोभलाग्दो फिटनेस हो ।
विराट कोहली एक असाधारण खेलाडी हुन्, उनीको असाधारण जीवन शैली पनि रहेको छ । क्रिकेट मैदान पछि, विराट कोहली जिममा आफ्नो अधिक समय बिताउँछन् । उनी विश्वका केही खेलाडी हुन्, जसले लामो समय फिटनेसका लागि खर्च गर्छन ।
विराटको कारण आज विश्व क्रिकेटका धेरै खेलाडीहरू फिटने युक्त भएका छन् । अर्को तिर तपाईं विराटलाई एउटा त्यस्तो खेलाडी मान्न सक्नुहुन्छ जसले विश्व क्रिकेटमा फिटनेसलाई प्रचार गरिरहेका छन् । यसको असर उनको ब्याटिङ्गमा पनि देखिन्छ । ब्याटिङ्गसँगै उनी फिल्डिङ्ग र रनिङ्गमा पनि उत्कृष्ट छन्।
तर विराटले यस्तो उत्कृष्ट फिटनेसको लागि धेरै कुरा त्याग गर्नु परेको छ । केही वर्ष अघि उनले भेगन हुने निर्णय गरेका थिए । भेगनहरू ती व्यक्ति हुन् जसले शाहकारी खानाका साथै दूधबाट बनेका उत्पादनहरू पनि खाँदैनन् । विराटको निर्णयपछि सबैले उनलाई स्टमिना बनाउन सक्नेछैनन् भन्ने अनुमान लगाएका थिए । तर विराट यस भ्रमलाई तोडेर विश्वको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी बन्न सफल भएका छन् ।
विराट कोहली फ्रान्सेली कम्पनी इभियनबाट आउने ‘प्राकृतिक वसन्त पानी’ पिउँछन् । १०० प्रतिशत प्राकृतिक त्यो पानी पूर्ण रसायनमुक्त छ । यसको मूल्य प्रति लिटर झण्डै १,००० देखि ५६,००० सम्म हुन्छ । भारतमा १ लिटर बोतलको इभियन पानीको मूल्य रु १,००० पर्दछ । विराट एक दिनमा २ देखि ३ बोतल पानी पिउँछन् । विराट वार्षिक १० लाख ५३ हजार रूपैयाँ भन्दा धेरैको पानी पिउँछन् ।
यो पानी पिउँदा तौल कम हुन्छ । यसको साथसाथै यसले मानसिक तनाव अर्थात डिप्रेसन पनि नियन्त्रण गर्दछ । यो पानी छालाका लागि लाभदायक हुन्छ । थप रूपमा, यसमा रासायनिक गुणहरू जस्तै क्याल्शियम, म्याग्नेशियम, क्लोराइड, पोटेशियम र सोडियम अन्य ब्रान्डको पानीको तुलनामा अधिक अनुपातमा हुन्छ ।
विराट विश्वका धेरै ठूला खेलाडीहरू बीच इभियन पानीको लोकप्रिय ब्रान्ड हो, किनकि यो १०० प्रतिशत प्राकृतिक छ । अमेजनमा इभियनको १ लिटरको बोतल ७२१ रुपैयाँ भन्दा धेरै हुन्छ । यो पानी यूरोपको हिमालबाट निकालिन्छ ।
यसरी नै नेपालको सगरमाथाबाट शतप्रतिशत प्राकृतिक पानी बनाएर बेच्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्थ्यो । कसैले सोचेको छ ? हामी पानी बेचेर विश्वको सम्पन्न देश बनाउन सक्ने थियौँ । किनकी युरोपको हिमाल भन्दापनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको महत्व अवश्यपनि धेरै छ । यसबाट आउँने पानीपनि शतप्रतिशत प्राकृतीक अवश्य बनाउँन सकिन्छ ।
डेब्यूमै कुशलको अर्धशतकले नेपाललाई दिलायो शानदार जित
नेदरल्याण्ड्सलाई हराउँदै नेपालको शानदार जित
टि–२० क्रिकेट सिरिज : नेपालले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा उद्घाटन खेल नेदरल्याड्ससँग खेल्दै
नेपाली सेनाका खेलाडीले जिते वीर गणेशमान सिंह स्मृति चौथो राष्ट्रिय किक बक्सिङ्ग प्रतियोगिता
उत्तर कोरियाले जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकमा आफ्ना खेलाडीहरु नपठाउने
नेपाललाई खेलकूदको गन्तव्य बनाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरको आह्वान
कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको पाँच दिनपछि सचिन तेन्दुलकर अस्पताल भर्ना
उपाधि जितेपछि नेपाली फुटबल टोलीले मैदान मै घन्कायो ‘केपी बा वी लभ यू’ को नारा [ भिडियोसहित ]
बङ्गलादेशलाई २–१ ले हराउँदै नेपाली फुटबल इतिहासमा अर्को उपाधि